vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Jona 2019 49 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny vondrom-piarahamonina
Hita ao amin'ny “The China in Africa Podcast” i Nwachukwu Egbunike
fisehoana-anaty-media09 Febroary 2021
Henoy ny tonindahatsoratry ny Global Voices ho an'ny faritra Afrika ambanin'i Sahara, no sady talen'ny Vondrompiarahamonina, miresaka momba ilay andian-dahatsorany vao haingana manodidina ny vaksiny iadiana ny COVID-19 omen'i Shina.
Janine Mendes-Franco, mpandray anjara efa ela, mitondra ny tantaran'i Karaiba ho an'ny mpamaky manerantany
Mediam-bahoaka07 Febroary 2021
"Nohamafisin'ny [GV] ny fiheverako fa mitovy kokoa isika na dia samy hafa aza."
Ny andraikitra tànan'i Khattab Hamad amin'ny famahàna ny olan'ny tsy fahampian'ny vaovao an-tambajotra mahakasika an'i Sodàna
Mediam-bahoaka20 Janoary 2021
"Tsy nahita votoaty ampy momba an'i Sodana izay nanome ahy ny aingampanahy hanampy an'i Mohamed hampita ireo olana atiny misy ao Sodana ho fantatr'izao tontolo izao."
Miaro ny zon'ny vondron'olona vitsy an'isa sy ny niova fananahana ao Pakistan i R Umaima Ahmed
Mediam-bahoaka17 Janoary 2021
"Mampifandray ahy amin'ireo mpandray anjara hafa ihany koa [ny fandraisako anjara ato amin'ny GV] ary manangana fifandraisana hampitomboana ny fahalalako sy ny fandraketako ny angondrakitra ara-kolontsaina sy ara-tsosialy!"
Ny firehetampon'i Mariam Abuadas hanome tanjaka ny media ao amin'ny faritra MENA
Mediam-bahoaka06 Janoary 2021
"Io asa [iarahana amin'ny Global Voices] io dia nanampy nampibaribary tamiko ny hantsana lalina amin'ny resaka torohay / vaovao teny anivon'ny vahoaka, na izany tao anatin'ireo vondrompiarahamonina miteny arabo, na nanerana izao tontolo izao.."
Dika19 Aogositra 2020
Ao anaty valanaretina iray, tohizan'ireo mpandika ato amin'ny Global Voices ny mandika ireo tantara avy amin'izao tontolo izao
Sosokevitra avy amin'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny birao
Mediam-bahoaka06 Jona 2020
Sharing the GV Community Feedback Form Fizarana ny Taratasy hamenoana ny Sosokevitra avy amin'ny Vondrom-piarahamonina.
Mediam-bahoaka03 Jona 2020
Ao anatin'izay mety ho fisalasalàna rehetra, misy teboka miabo iray mitoetra: ny fireharehàna hoe vitantsika ny miantoka ny asantsika amin'ny maha-fikambanana antsika.
Angon-kevitra ho an'ireo mpihaino rakipeo
Mitady tari-dàlana avy amin'ireo mpihaino rakipeo manerana izao tontolo izao ireo Vondronà Mpandrakipeo maniry ny hamelona indray ny rakipeo efa ampolotaonany maro, hamantaran-dry zareo ny fihainon-dry zareo mahazatra sy ny ankafiziny.
Blaogim-Piarahamonina GV16 Marsa 2020